Ukukhutshwa kweCanonical Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Khuphela ngoku | Ubunlog
Sele ilusuku lwe-D kunye neeyure ze-H, okanye ngaphezulu okanye ngaphantsi. I-D-Day, ngo-Epreli 18. Iyure H yinto esinokuxoxa ngayo, ukusukela ngoku Ubuntu 19.04 ngoku inokukhutshelwa, kodwa kusafuneka silinde ithutyana ukuze silibone kumaphepha asemthethweni eencasa ezahlukeneyo ze-Ubuntu. Oku kuqhelekile kwaye kwenzeka rhoqo kwiinyanga ezintandathu: qala ngokulayisha imifanekiso ye-ISO kuyo cdimage.ubuntu.com kwaye emva koko bahlaziya amaphepha ewebhu enza ukuba kuphehlelelwe ngokusesikweni.
Inguqulelo entsha iya kudanisa abanye abasebenzisi. Kwaye akukho zindaba zibalaseleyo "ukubiza" ngaphandle kwento yokuba iza neLinux Kernel 5.0. Yintoni eyothusayo ngumfanekiso omtsha ohlaziye umxholo ongagqibekanga ka-Ubuntu, oku kwimeko yenguqulo ephambili yenkqubo yokusebenza ephuhliswe yiCanonical. Inkqubo ye- Ukungabikho okukhankanyiweyo kukuba ukudityaniswa kwe-Android kuya kufuneka kulindeiinyanga ezintandathu ubuncinci.
1 Yintoni eNtsha ku-Ubuntu 19.04
1.1 Amakhonkco omdla:
Yintoni eNtsha ku-Ubuntu 19.04
Gcina ukhumbula ukuba iinkcukacha ezincinci zisaza kufunyanwa, kodwa phakathi kwento eza nale nguqulo intsha sinayo:
Inkxaso iya kuba ziinyanga ezili-9, njengazo zonke iinguqulelo ezingezizo ze-LTS.
Njengoko bekulindelwe kwaye besisele sazi, kubandakanya imvelaphi entsha yedesktop, inja eneefowuni ozibonileyo kumanqaku ahlukeneyo e-Ubunlog.
Inkqubo izuze okuninzi ngesantya, into eya kwenza ukuba abo baphoxekileyo ekuqaleni bayeke ukuba.
Amandla okuphawula iifayile kwiNautilus.
Iinguqulelo zamvanje zezicelo ezinje ngeFirefox, iThunderbird okanye iLibreOffice.
Umxholo weYaru uxhasa usetyenziso oluninzi, kubandakanya usetyenziso lweqela lesithathu. Yabamba ingqalelo yam nje ukuba ndiqalise i-USB ukufaka inkqubo.
Ulawulo lweemvume zesicelo. Ubuntu 19.04 iyakusivumela ukuba silawule ngcono ukuba yintoni isicelo esinokuyenza kwaye asinakukwenza kuseto lweZicelo ezitsha.
Ukuphuculwa kwenkqubo yeTheminali: uhlobo olutsha lweTheminali lubandakanya iithebhu, into efana nale siyibonayo kumhleli wombhalo osisiseko. Singavula iithebhu ezintsha kwiqhosha elinikwe amandla. Kuya kubakho nelinye iqhosha lokukhangela.
I-Livepatch: ngale nto sinokuyihlaziya ikernel ngaphandle kokuqalisa kwakhona.
Ulawulo lobushushu bokuKhanya ebusuku.
Ukuphuculwa kolawulo lweaudiyo.
I-Linux Kernel 5.
Ukuba sifumana iindaba ezinomdla, siya kuzipapasha ngokukhawuleza. Ngaba ukhe wafumanisa nantoni na ebalulekileyo?
Umzekelo wofakelo Ubuntu (kule meko MATE).
Yenza i-USB ebukhoma kwi-MacOS kunye neWindows. Ukusuka kwiLinux, qala nje isixhobo sokudala isixhobo sediski.
Unokuzikhuphelela i-X-Buntu 19.04 kwezi zixhumanisi: Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, Ubuntu, Ubuntu Kylin, Ubuntu Studio y Xubuntu. UKUHLELA: Ubuntu umfanekiso awukalayishwa. Ivela ku-Ubuntu Server. Umonde.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ukukhutshwa kweCanonical Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Khuphela ngoku
VSCodium, enye indlela kwiKhowudi yeVenkile yeVidiyo ukuyifaka ku-Ubuntu